भ,गवान को लिला : घर फर्किदै गरेका उनिहरुः सडकघारीकाे पानी खाएर छेउकाे रुखमुनी छहारीमा बसिरहेका थिए! - सप्तरंगी संसार::– रंगिबिहिनहरुको रंग
भ,गवान को लिला : घर फर्किदै गरेका उनिहरुः सडकघारीकाे पानी खाएर छेउकाे रुखमुनी छहारीमा बसिरहेका थिए!
शुक्रबार बिहानकाे समय थियाे । शिवजन मावी सितलपाटी सल्यानमा कक्षा १२ काे परिक्षा दिएर बरलाका करिब १७/१८ वर्षका रेखा बुढाथोकी, सुनिता नेपाली, सुशीला नेपाली, मिना परियार र दिपा बुढाथोकी घर फर्किदै थिए । उनिहरू सधै सँगै हिड्ने र मिल्ने साथी हुन् ।
यसरी ति,व्र ग,तिमा आएकाे गाडीलाइ चालकले नियन्त्रणमा लिन सक्दैनन् । अन्तत सडक छेउमा बसेका पाँच जना छात्राहरूमा ठाेक्किएर १० मिटर तल खेतमा पुग्छ । ति,व्र ग,तिमा आएकाे स्कार्पियाेले ठ’क्क’र दिँदा काेहि गाडीसँगै खेतमा पुग्छन् भने काेहि सडक छेउमै पछारिन्छन् । स्कार्पियाे भित्र अन्य यात्रुहरु पनि थिए । तर उनिहरु भने सकुशल छन् ।
दु’र्घटनामा परेका पाँच छात्रा मध्ये २ जनाकाे मृ, त्यु भएकाे छ भने ३ जनाकाे अहिले नेपालगन्जमा उपचार भैरहेकाे छ । मृ,त्यु हुनेमा रेखा बुढाथोकी र सुनिता नेपाली रहेका छन् । घाइते सुशीला नेपाली, मिना परियार र दिपा बुढाथोकीकाे उपचार भैरहेकाे छ ।
पाँचै जनालाइ उपचारका लागि नेपालगन्ज लिदै गर्दा २ जनाकाे बाटाेमै मृ,त्यु भएपछि उनिहरुकाे श,व अहिले जिल्ला अस्पताल सल्यानमा ल्याइएकाे छ ।
यतिखेर बरला गाउँ शाे’कमा डुबेकाे छ । मृ,तक तथा घा,इतेका आफन्तले दाेषिलाइ कडा कारबाही र उचित क्ष,तिपुर्तीकाे माग गर्दै दिउँसाेदेखि राप्ती राजमार्ग अ,वरुद्ध गरेका छन् । गाडी धनि सम्पर्कमा ल्याएर सहमति गर्ने प्रयास प्रहरीले गरेकाे जनाएकाे छ ।